Recalbox 6.0 inosvika nerutsigiro rweRaspberry Pi 3B + uye zvimwe zvakawanda | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazuva apfuura Iyo yazvino vhezheni yeRecalbox 6.0 yakaburitswa ine codename "DragonBlaze" uye ndeyekuti iyi vhezheni nyowani yekuparadzirwa kweLinux yakapihwa kudzokorodza inouya nezvinhu zvakawanda zvitsva iyo inofanirwa kunakidza vekare vechikoro vatambi, asi zvakare kuvhura masuo e retro vhidhiyo mutambo kune wakanyanya nhamba
Uye, zvakanaka, mushure memwedzi yakati wandei yekugadzirira uye mamwe maRCs, iyo nyowani vhezheni yeRecbox 6.0 inozowanikwa uye Pakati pehunhu hwayo hwakakurumbira kutsigirwa kweiyo Raspberry Pi 3 B +.
1 Regedza kuverenga kwenhamba
1.1 Tsigiro yemakadhi matsva.
1.2 Demo modhi
1.3 Emulators matsva
2 Microsoft inoshandura mutyairi rutsigiro
Regedza kuverenga kwenhamba
Imwe pfungwa yandinoda kusimbisa ndeyekuti kare yanga ichitevera kuburitswa kwenhamba neRecalbox kutenderera musi waakaburitswa kureva kuti "18.07.13"(Iyo yazvino vhezheni ine iyi nhamba) inoratidza" gore, mwedzi uye zuva ".
Izvi hazvichazove zvakadaro sezvo kubvira zvino nhamba nyowani ichateverwa kutanga ne6 + kodhi zita. Kunyangwe ivo vanogadzira vasina kuiburitsa pachena kuti zvichaenderera mberi sei kana vachizove "poindi" kana kuwedzeredza shanduro (7, 8, 9 nezvimwewo)
Tsigiro yemakadhi matsva.
Sezvakataurwa pakutanga uyeIyi vhezheni nyowani inowedzera kutsigira yazvino vhezheni yeRaspberry iyo nharaunda ichakwanisa kushandisa iyi retro mutambo wemitambo pamakadhi matsva, kutanga neRaspberry Pi 3 B +, iyo yekuwedzera kuwedzera kune nano-makomputa.
Kubva kuenderana uku kwaitarisirwa kwemwedzi yakawanda nekuda kwekuita kwayo kuvimbisa, sezvo Raspberry Pi 3 B + ine zvishoma zvine simba zvinhu kupfuura yapfuura Raspberry Pi shanduro.
Iine yayo yakavandudzwa networking maficha (Gigabit Ethernet uye 5 GHz Wi-Fi) uye yayo 1.4 GHz processor, inofanira kukwanisa kuunza yakasarudzika mukana mukunyaradza emulation iyo inogona kunge whimsical. Funga nezve PlayStation kana Nintendo 64.
Pamusoro pekutsigira iyo Raspberry Pi 3 B + neiyo inoshanda system Iyo zvakare inoenderana neRaspberry Compute 3 module uye Pine64 mabhodhi ekuvandudza, Rock64 ndiyo Rock64Pro.
MuRecalbox 6.0 Chinhu chakamirirwa kwenguva refu chinonzi "Demo modhi" chawedzerwa.
Iri basa nyowani rakawedzerwa kuhurongwa inoshanda se "screen saver" uko Recalbox, ita iyo demo modhi (Demo modhi) iyo inotanga otomatiki kana iwe ukasabata chero bhatani controller kwechinguva (inogadziriswa).
Apa ndipo panomuka mashiripiti sezvaari Nenguva isipi sarudza mutambo mune yako yekuunganidza uye Recalbox inotanga kuiridza kwemaminetsi mashoma.
Chinhu chakakosha nezve iyi "Demo modhi" ndechekuti inobvumidza, kana bhatani rekutanga rakadzvanywa, kutanga otomatiki mutambo urikuratidzwa pachiratidziri.
Pamusoro pekugadzirisa kune yazvino vhezheni dzevamiririri vatove muRecalbox.
Iye zvino mune iyi vhezheni itsva ye Recalbox 6.0 yakawedzera makumi matatu emulators, Iyo kutsigirwa kwemasisitimu kunogona kusimbiswa mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani. seAtari 5200, Atari 8 Bit, Intellivision, SamCoupé, Amiga CD32, NeoGeoCD, Jaguar, nezvimwe.
Microsoft inoshandura mutyairi rutsigiro
Recalbox yakagara iri yakapusa uye inokurumidza yekumisikidza system ine yakajeka interface, sezvo Recalbox inoda zvishoma kuita nesimba kugadzirisa.
Uye zvakare, nekuda kwekutsigirwa kweMicrosoft Adaptive Controller, Recalbox inovhura maitiro ayo kune veruzhinji vakaremara.
Uyu mutungamiriri eIko chaiko shanduko maererano nekuwanikasezvo inobvumidza iwe kugadzira nharaunda yemitambo ine zvakawanda zvishongedzo.
Seizvo zita rinoratidzira, mutyairi anochinja uye anozvigadzirisa pachayo zvichienderana ne. Maitiro ayo emodularity anoita kuti ive iyo yekumusoro controller kune vanhu vane kuderedzwa kwekufamba, kunyangwe ivo vachida kutamba paPC, Xbox kana imwe yemasystem akateedzerwa neRecalbox.
Yezvimwe zvitsva zvinowanikwa mune iyi nyowani kuburitswa tinowana:
Yakagadziridzwa Bluetooth uye Wi-Fi
Yakagadziridzwa manejimendi manejimendi, kusanganisira vanonyanya kudanwa "8bitdo" vatongi
".7z" faira inotsigira mazhinji emulators
FBA Libretro yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni. (Romset ikozvino yakakurudzirwa: 0.2.97.44)
Virtual keyboards zvino anowanikwa muAZERTY kana QWERTY
Dhawunirodha RecalBox 6.0 DragonBlaze
Si iwe unoda kurodha ino sisitimu yako Raspberry Pi kana kuishandisa pakombuta yako Iwe unofanirwa kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti kwaunogona kuwana iyo yazvino system mufananidzo.
Ivo vanogona kuitora kubva pano.
In the Ivo vanofanirwa kusarudza chishandiso chavanoshandisa cheRecalBoxOS uye tora iyo vhezheni inoenderana nayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Recalbox 6.0 inosvika nerutsigiro rweRaspberry Pi 3B + uye nezvimwe zvakawanda
Maitiro ekuona maasterisks kana uchipinda password yedu mune terminal